Caajiska Culimmadda iyo Aamusnaanta Aqoonyahanka-
24/09/2010 - 19:50:27 Maqaallada 0 3347 Super Admin
Filoosoferkii Girgiiha ahaa Plato ayaa wuxuu yiri: kuwa aadka u masxada (khibrada, aqoonta iyo kartida) badan ee aan doonayn (ka gaabsanaya , baqaya) inay saaxada sisaasadeed faraha la galaan waxaa lagu ciqaabaa inay hogaanka u qabtaan kuwo qafilan oo aan (caqli, xigmad, aqoon iyo karti) midna lahayd.
Goormuu Bilowday Dagaalka Iyo Xasuuqa Ay Saliibiyiintu Ku Wadaan Muslimiinta?
24/05/2010 - 21:18:34 Maqaallada 0 5806 Super Admin
laahay subxaanahu watacaalaa ayaa amaan,hufnaan,mahad iyo kheyr aan la koobi karin mudan marwalba.Nabad iyo Naxariis ilaahay ha yeelo Nabi Muxammad korkiisa isaga iyo eheladiisa,asxaabta suubanaha ilaahay ha raali noqdo dhammaantood rag iyo dumarba.
Awaal-Tiris- Waan maanso cusub oo uu curiyey Abwan Hadraawi
03/04/2010 - 11:12:45 Maqaallada 0 4702 Super Admin
waa maanso cusub oo uu tiriyay abwaanka caanka ah ee maxamed Ibraamih Warsame Hadraawe
Taxane: Qisada Ahmed iyo Nasiib Qaybtii 14-aad
20/01/2010 - 22:15:31 Maqaallada 0 2913 Super Admin
Waa qaybtii 14 aad oo aan idinka kaga soo gudbinayno Buuga Ahmed iyo Nasiib oo aad nooga barateen Maalin kasta oo Talaado ah. Hadaba Hawaase wacan.
Taxane: Qisada Ahmed iyo Nasiib Qaybtii 13-aad
15/01/2010 - 10:03:54 Maqaallada 0 2736 Super Admin
Waa qaybtii 13 aad oo aan idinka kaga soo gudbinayno Buuga Ahmed iyo Nasiib oo aad nooga barateen Maalin kasta oo Talaado ah. Hadaba Hawaase wacan.
Taxane: Qisada Ahmed iyo Nasiib Qaybtii 12-aad
05/01/2010 - 10:49:38 Maqaallada 0 2715 Super Admin
Waa qaybtii labo iyo Tobnaad oo aan idinka kaga soo gudbinayno Buuga Ahmed iyo Nasiib oo aad nooga barateen Maalin kasta oo Talaado ah. Hadaba Hawaase wacan.
Taxane: Qisada Ahmed iyo Nasiib Qaybtii 11-aad
10/12/2009 - 10:36:01 Maqaallada 0 2472 Super Admin
Waa qaybtii Kawyo Tobnaad oo aan idinka kaga soo gudbinayno Buuga Ahmed iyo Nasiib oo aad nooga barateen Maalin kasta oo Talaado ah. Hadaba Hawaase wacan.
Taxane: Qisada Ahmed iyo Nasiib Qaybtii 10-aad
03/12/2009 - 09:21:24 Maqaallada 0 2397 Super Admin
Waa qaybtii Tobnaad oo aan idinka kaga soo gudbinayno Buuga Ahmed iyo Nasiib oo aad nooga barateen Maalin kasta oo Talaado ah. Hadaba Hawaase wacan.
Xikmada Dumarka iyo Hab dhaqankeeda
25/11/2009 - 10:54:46 Maqaallada 0 11950 Super Admin
Haweenta waa ay qososhaa marka ay awoodo , waxa ay ooysaa marka ay doonto. xikmado aad u macaan.
Taxane: Qisada Ahmed iyo Nasiib Qaybtii 8-aad
17/11/2009 - 09:37:34 Maqaallada 0 3740 Super Admin
Waa qaybtii Sideedaad oo aan idinka kaga soo gudbinayno Buuga Ahmed iyo Nasiib oo aad nooga barateen Maalin kasta oo Talaado ah. Hadaba Hawaase wacan.
Taxane: Qisada Ahmed iyo Nasiib Qaybtii 7aad
11/11/2009 - 09:35:24 Maqaallada 0 2846 Super Admin
Waa qaybtii Todobaad oo aan idinka kaga soo gudbinayno Buuga Ahmed iyo Nasiib oo aad nooga barateen Maalin kasta oo Talaado ah. Hadaba Hawaase wacan.
Taxane: Qisada Ahmed iyo Nasiib Qaybtii 6aad
04/11/2009 - 10:04:41 Maqaallada 0 4418 Super Admin
Waa qaybtii Lixaad oo aan idinka kaga soo gudbinayno Buuga Ahmed iyo Nasiib oo aad nooga barateen Maalin kasta oo Talaado ah. Hadaba Hawaase wacan.
Taxane: Qisada Ahmed iyo Nasiib Qaybtii 5aad
27/10/2009 - 10:48:56 Maqaallada 0 4042 Super Admin
Waa qaybtii shanaad oo aan idinka kaga soo gudbinayno Buuga Ahmed iyo Nasiib oo aad nooga barateen Maalin kasta oo Talaado ah. Hadaba Hawaase wacan.
Taxane: Qisada Ahmed iyo Nasiib Qaybtii 4aad.
20/10/2009 - 09:14:58 Maqaallada 0 3702 Super Admin
Waa qaybtii Afaraad oo aan idinka kaga soo gudbinayno Buuga Ahmed iyo Nasiib oo aad nooga barateen Maalin kasta oo Talaado ah. Hadaba Hawaase wacan.
STAAMAHA MAALINTA QIYAAMAHA LAGU GARTO
16/10/2009 - 08:55:42 Maqaallada 0 3586 Super Admin
Cabdillaahi Ibnu Cabbaas (RC) Wuxuu yidhi: Nebi Muxammed (NNKH) markii uu dhamaystay Xajkiisii ugu dambeeyey oo ku beegnayd sannaddii 10aad ee Hijriyada ayuu hor istaagey Irridda laga galo Kacbada barakeysan isagoo gacanta ku haya Furihii Albaabkaas, Isla markaana wuxuu Asxaabtii ku ydhi:- MA IDIIN…
Taxane: Qisada Ahmed iyo Nasiib Qaybtii 3aad.
13/10/2009 - 08:41:22 Maqaallada 0 3810 Super Admin
Waa qaybtii Sadexaad oo aan idinka kaga soo gudbinayno Buuga Ahmed iyo Nasiib oo aad nooga barateen Maalin kasta oo Talaado ah. Hadaba Hawaase wacan.
Taxane: Qisada Ahmed iyo Nasiib Qaybtii 2aad.
06/10/2009 - 07:36:05 Maqaallada 0 4972 Super Admin
Waa qaybtii labaad oo aan idinka kaga soo gudbinayno Buuga Ahmed iyo Nasiib oo aad nooga barateen Maalin kasta oo Talaado ah. Hadaba Hawaase wacan.
Taxanne: Qisada Ahmed iyo Nasiib Qaybta 1aad
29/09/2009 - 08:22:01 Maqaallada 0 4670 Super Admin
Waxaan Akhristayaasha sharafta iyo qiimaha badan ku war galinaynaa in aan si Taxanne ah ugu soo gudbin doona Qisada Book-ga Lamagac baxay Axmed & Nasiib oo uu qoray Qoraaga Da'da yar ee Ahmed Abdirahman Kadawe ( Carabay) Qisadaan waa mid dhab ah oo ku dhacday qoraaga nafsad ahaantiisa. Hadii Allah…
Walee Rag Jaceyl Baray (Sheeko Qoso iyo Xikmad leh)
22/09/2009 - 07:50:47 Maqaallada 1 5673 Super Admin
Qarnigaan 21aad wax kasta wey hormareyn sida isgaarsiinta, aqoonta iyo tagnoolijiyada qeybaheeda kala duwan. Waxaa sidoo kale hormarkaasi si fiican ula hana qaaday jaceylka u dhaxeeya labo qof oo isdooratay. Inkastoo jaceylka barashadiisa lookala hoorey.
05/08/2009 - 07:24:01 Maqaallada 0 1532 Super Admin
NIN INDHO LA� OO EEBBE (SW) ISAGA DARTIIS KU SOO DEJIYAY 16 AAYADOOD, KUWAASOO LA AQRIYAY, LANA AQRIN DOONO LABADII CUSBAA INTAY KA SOO LAABTAAN (HABEENKA & MAALINTA)" (9)